ဂျပန်၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်း - ပန်းချီကားများ (အအိုမိုရိ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျပန်၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်း - ပန်းချီကားများ (အအိုမိုရိ)
ဤစာရင်းသည် အအိုမိုရိခရိုင်အတွက် ပန်းချီကား(絵画 kaiga?) ကတ်တလောက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများ စာရင်း ဖြစ်သည်။ 
၁ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများ
၂ ခရိုင်အဆင့် ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများ
၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ ထိ၊ အမျိုးသား(နိုင်ငံတော်)အဆင့် ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်း မရှိသေးပါ။ 
၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၃ ထိ၊ ပစ္စည်း ခြောက်မျိုးကို ခရိုင်အဆင့်၌ ထားရှိသည်။ 
Byōbu with map of the world
sekai chizu byōbu
အဲဒိုခေတ်အစောပိုင်း Aomori (အအိုမိုရိ) သီးသန့် ခြောက်ခန်း 40°49′34″N 140°45′00″E﻿ / ﻿40.826150°N 140.749948°E﻿ / 40.826150; 140.749948﻿ (Honchō) 
Shinran and associated figures
ရှင်းရန်းနှင့် အပေါင်းအပါများ ရုပ်ပုံ
Shinran shōnin renza miei
မုရိုမချိ ခေတ် Ajigasawa (အဂျိငစဝ) ရိုင်းရှော ဘုရားကျောင်း (来生寺?) ကားချပ် ၁ ခု၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်ထားပြီး၊ ထိပ်ဆုံးတွင် ဟိုနင်း၊ အောက်တွင် ရှင်းရန်း(ဂျောဒို ရှင်းရှူးကျောင်းကို ထောင်သူ)နှင့် သူ့တပည့်များပုံ။ ၁၄၃.၀ စင်တီမီတာ (၅၆.၃ လက်မ) by ၄၈.၀ စင်တီမီတာ (၁၈.၉ လက်မ) 40°46′57″N 140°12′05″E﻿ / ﻿40.782442°N 140.201286°E﻿ / 40.782442; 140.201286﻿ (Raishōji) 
Image of Amida Nyorai
အမိဒ ညောရိုင် ဘုရားပုံတော်
Amida Nyorai zō
မုရိုမချိခေတ် အဂျိငစဝ ရိုင်းရှော ဘုရားကျောင်း (来生寺?) ကားချပ် ၁ လိပ်၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်၊ အလင်းတန်း ၄၈ ခုက အမိဒ၏ သစ္စာ ၄၈ ချက်ကို သင်္ကေတပြုထား။ ၁၃၄.၀ စင်တီမီတာ (၅၂.၈ လက်မ) by ၃၈.၀ စင်တီမီတာ (၁၅.၀ လက်မ) 40°46′57″N 140°12′05″E﻿ / ﻿40.782442°N 140.201286°E﻿ / 40.782442; 140.201286﻿ (Raishōji) 
Taima Mandala, colours on silk
တိုက်မာ့ မဏ္ဍလ၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်။
kenpon chakushoku Taima Mandara-zu
ခမခုရခေတ် Hirosaki (ဟိရိုဆကိ) Teishō-ji (貞昌寺?) နှစ်တိုင်း နွေဦးနှင့် ဆောင်းဦး နေ့ညညီချိန်မှာ ပြသ။ 40°35′39″N 140°27′42″E﻿ / ﻿40.594265°N 140.461621°E﻿ / 40.594265; 140.461621﻿ (Teishōji) 
Byōbu with scenes of cherry- and maple-viewing, colours on paper (by the brush of Arai Seihō)
ချယ်ရီနှင့် မေပယ် ရှုခင်းပုံပါ ယင်းကာ၊ စက္ကူပေါ် ဆွဲ (အရိုင်း စေးဟိုး၏ စုတ်တံနှင့်)
Arai Seihō-hitsu shihon chakushoku kanō kanpō-zu byōbu
အဲဒိုခေတ်နှောင်း ဟိရိုဆကိ ဟိရိုဆကိ မြို့
(ဟိရိုဆကိ မြို့ပြတိုက် (弘前市立博物館?) ၌)
40°36′19″N 140°27′45″E﻿ / ﻿40.605262°N 140.462555°E﻿ / 40.605262; 140.462555﻿ (Hirosaki City Museum) 
Image of Shōbō, colours on silk
ရှောဘိုး၏ ပုံ၊ ပိုးသားပေါ် ဆေးခြယ်။
kenpon chakushoku Shōbō sōjō zō
C14 (first half) Fukaura (ဖုကအုရ) အင်းငခု ဘုရားကျောင်း (円覚寺?) 1 scroll; brought to Engaku-ji in the Meiji period; during repairs in 2003 two paper slips dating to repairs in 1772 were discovered, documenting that prior to that year the painting was housed in the Jōrokudō at Daigo-ji, founded by Shōbō; there are few mediaeval images of important non-Zen Buddhist figures in Tōhoku 40°38′32″N 139°55′22″E﻿ / ﻿40.642256°N 139.922755°E﻿ / 40.642256; 139.922755﻿ (Engakuji) 
↑ Preservation and Utilization of Cultural Properties။ Agency for Cultural Affairs။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 国宝・重要文化財 (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs (1 September)။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Database of National Cultural Properties: 国宝・重要文化財（美術品）(絵画 青森県) (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 国・県指定文化財一覧 (in Japanese)။ Aomori Prefecture (14 August 2013)။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 都道府県別指定等文化財件数（都道府県分） (in Japanese)။ Agency for Cultural Affairs (1 May 2013)။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 県重宝 (in Japanese)။ Ajigasawa Town။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 絹本著色当麻曼荼羅図 (in Japanese)။ Hirosaki City။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 新井晴峰筆　紙本著色観桜観楓図屏風 (in Japanese)။ Hirosaki City။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
(ဂျပန်) Cultural Properties in Aomori Prefecture
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျပန်၏_ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်း_-_ပန်းချီကားများ_(အအိုမိုရိ)&oldid=435050" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၂၀:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။